Tuesday June 25, 2019 - 11:12:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisada siyaasadeed ayaa wali ka jira degmooyin katirsan gobolka Galguduud ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya, khilaafka u dhaxeeya saraakiisha maamulka Galmudug ayaa sii xoogeystay.
Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo wasiirro kamid yihiin ayaa xalay ku hoyday degmada Dhuusamareeb halka Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo tiro xildhibaano ah ay iyana gaareen magaalada Cadaado.
Kulamo iskasoo horjeedo ayay dhinacyadan ka wadaan magaalooyin ku teedsan wadada laamiga ah, Xaaf oo kasoo guuray Dhuusamareeb ayaa xarun ka dhigtay magaalada Cadaado halkaas oo uu ka wado qaban qaabada doorashooyinka 'Galmudug'.
Xaaf oo wata ciidamo aad ufarabadan ayaa xalay fiidkii loo gelbiyay dhismaha madaxtooyada magaalada Cadaado halkaas oo ay ugasii horreeyeen xildhibaanno mucaaradsan siyaasadda Kheyre.
Dowladda Farmaajo oo sanadadii lasoo dhaafay xusul duub ugu jirtay sidii ay ubedeli laheyd hoggaanka maamulka fadhiidka ah ee isku magacaabay Galmudug ayaa hadda doonaysa in ay xukunka udhiibto Kooxaha Mushrikiinta ee maamula Guriceel iyo Dhuusamareeb.